Telo mianadahy tra-tehaka teo am-panamboarana vola sandoka • AoRaha
Telo mianadahy tra-tehaka teo am-panamboarana vola sandoka
Noraisim-potsiny teo ampanamboarana vola sandoka, tany Antsirabe ireo olona telo, nahitana lehilahy roa sy vehivavy iray, mitonona ho mpiasan’ny Banky foibe, afak’omaly. Nanaovan’ny kaomandin’ny tobimparitry ny Zandarimaria (CB) velapandrika izy ireo. Ravin-taratasy efatra voadidy toy ny vola no narotsaka tao anaty ranona vovon-tsavony, avy eo lasa efatra alina ariary, no nifanarahan’ny zandary ka namandrihana azy telo.
Avy tamin’ny angom-baovao azon’ny Zandarimaria any Antsirabe, tamin’ny 16 jolay lasa teo, no nahafantarana ny fisian’ireo olona mpanamboatra vola any an-toerana. Vehivavy iray no tafahaona tamin’ ny lehiben’ny borigady. “Nolazainy fa misy mpiasan’ ny Banky foibe avy aty Antananarivo afaka manamboatra vola taratasy. Akora hafa no ampiarahana aminy ka rehefa sasana miaraka ireo zavatra ireo no mamoaka vola iray alina ariary na roa alina ariary tena izy”, hoy ny loharanom-baovao any Antsirabe.
Nifandray an-tariby sady nifanaraka ny handoa vola folo tapitrisa ariary mba hahazoana vola avy namboarina mitentina 30 tapitrisa ariary tamin’ireo olona nitonona ho mpiasan’ny Banky foibe ny lehiben’ny zandary. Natao, ny andron’ny 18 jolay, ny andrana sy fifanakalozana tao amin’ny trano fandriam-bahiny iray eny Ambavahadimangatsiaka. Tonga tao tokoa ny lehilahy roa sy vehivavy iray nitondra ravintaratasy voadidy toy ny vola iray alina ariary, izay voafono tamin’ny taratasy vy fotsy sy akora hafa. Nasain’izy ireo nitondra vovontsavony sy fanindrona ilay lehiben’ny zandary. Niaraka tamin’ny fandrebirebena samihafa ny hakingan-tanana nataon’ ireto mpanao vola sandoka, ka namoahan’izy ireo vola taratasy roa alina miisa efatra, taorian’izay. Efa fantatra mialoha anefa ny teti-dratsin’ireto telo mianadahy ireto ka niditra mora sy nisambotra azy ireo ny ekipan’ny Zandarimaria any Antsirabe, rehefa vita ny fandre-bireben’izy ireo. Mandeha ny famotorana azy telo, amin’izao fotoana izao.
Seha-pihariana :: Miha miroborobo noho ny fihibohana ny varotra anaty tambajotra
Fikarohana :: Mitety tanàna ny havan’ireo mpianaka very